We Fight We Win. -- " More than Media ": မီးမလာ တဲ့ ပြသနာ ရဲ့တရားခံဟာ တေ ဇ ဖြစ်တယ်။
မီးမလာ တဲ့ ပြသနာ ရဲ့တရားခံဟာ တေ ဇ ဖြစ်တယ်။
( မီးမရှိလို့ကြုံရာဗက်ထရီမီးနဲ့ ခွဲစိတ်နေရတဲ့ ဆရာဝန်များ )
မြန်မာ ပြည်မှာ နှစ် သန်း ပေါင်းများ ကတည်းက လူဆင်းရဲတွေ နေတဲ့ ကျေးရွာ ရပ်ကွက်
တွေမှာ မီးမလာ ခဲ့တာပါ။ မြန်မာ ပြည်က လူချမ်းသာရပ်ကွက်တွေ၊ လူကြီးတွေနေတဲ့ရပ်ကွက်
တွေ မှာတော့ မီးလာပါတယ်။ ဒီလူတွေ က ဆင်းရဲသားတွေ မီးမလာတဲ့ ကိစကိုလျစ်လျူရှု ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတော့ မီးဟာ
၀င်ဒါမီယာရပ်ကွက် ရော၊ ဆေး၇ုံတွေမှာပါမလာတော့ဘူးလို့ သိရတယ်။ ၀င်ဒါမီယာထဲက
လူချမ်းသာ တချို့ ဟာ မီးရတဲ့ ဟော်တယ်တချို့မှာသွားနေရတယ်လုို့ သိရတယ်။ မီးမလာလို့ 
ဒုကခရောက်သူတွေထဲမှာ တေဇ ရဲ့ မယားငယ်တဦးလဲပါနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တေဇ က သူ မယားငယ်ကို ဟောတယ်မှာသွားနေဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အခုတလောမှာ စင်္ကပူမှာအနေများလာတယ်လို့ ဆိုတယ်။
( ကရင်၊ ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ် က သစ်တောကြီးတွေကို မြေလှန် ခုတ်ယူသွားတဲ့
မြန်မာ ပြည်မှာ မီးတွေ ဘာကြောင့်မလာတာလဲ။မီးမလာတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ မှာတာဝန်ရှိသလဲ လို့ မေး စရာမေးခွန်းဖြစ်လာပါတယ်။
အမေရိကန် ၊ ဂျပန် နဲ့ ထိုင်း နိင်ငံတွေ ရဲ လျပ်စစ်မီးတွေ ဟာ အဓိက ရေနံ ပေါ်မှာ အားပြုလည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။(သဘ၀ဓါတ်ငွေ့ ကျောက်မီးသွေး၊ နယူးကလီးယား တွေနဲ့လည်း လျှပ်စစ်ကိုထုတ်ယူပါတယ်။ )
ရေနံက အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်က လျပ်စစ်မီး ဟာ ရေအားလျှပ်စစ်ပေါ်မှာ အား ပြုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ ၈၈ ခုနစ် နောက်ပိုင်းမှာ တော့
တေဇ ရဲ့ထူး သစ်ကုမဏီ ကောင်းမှုနဲ့မြန်မာ ပြည်က သစ်တောကြီးတွေကို ဆင်ခြင်ညဏ်ကင်းမဲ့စွာ ခုတ်ယူ ရောင်းစားခဲ့တယ်။ သစ်တောတွေဘယ်လောက်ပြုံးတီးသွားသလဲ ဆိုတာကို ဂူဂဲလ် မြေပုံမှာ အင်တာနက်ကနေတဆင့်ကြည့်နိင်ပါတယ်။
သစ်တောတွေကုန် သွားတဲ့အတွက် မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိုးမရွာတော့အတွက်
ရေအားလျပ်စစ် ကို အားထားထုတ်ယူဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိင်တော့ပါဘူး။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာ အရင်အစိုးရဟောင်းလက်ထက်က လုပ်ထားခဲ့တဲ့
ဆိုးမွေးတွေကို ဆက်တိုက်ခံနေရပါတယ်။ လျပ်စစ်မီးပြသနာ ဥုံဖွ ဆိုပြီး တထိုင်တည်းနဲ့ 
မန်းမုတ်လို့ ၊ ဗေဒင်ယတြယာနဲ့တွက်ထုတ်လို့ မရတဲ့ ပြသနာ တရပ်ဖြစ်လာပါပြီ။
နောက် ၂ ပတ် လောက်အထိ မီးပြသနာ ကိုမဖြေရှင်းပေးနိင်ရင် တော့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ
ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ၂၀၁၅ အထိ ခံနိင်ပါ့မလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။
မီးအရေးက တစတစ နဲ့ ကျယ်ပြန့် သထက်ကျယ်ပြန့် လာမဲ့အရေးပါ။
ဦးသိန်းစိန် ဟာအဖြေကိုစဉ်းစားထားဖို့ လုိုပါတယ်။
လျပ်စစ်မီး မရှိတော့တဲ့ပြသနာဟာ တကယ်ကတော့ဦးသိန်း စိန် မှာ အပြစ်မရှိပါဘူး။
လျပ်စစ်ဝန်ကြီးဇော်မင်း ဆိုတာကလဲ ကိုင်းဖျား ကိုင်းနာ သာဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်ရှိတဲ့အဓိက တရားခံဟာ တေဇ ရဲ့ ထူးသစ်ကုမဏီ သာဖြစ်တယ်။
သစ်တောတွေကိုခုတ်ပြီး အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းခဲ့တဲ့ တေဇ ကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ပြုဖို့ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
Ko Moe thee is digging something. Might be he had some conflict with tayza since they knew each others long time back before 1988
Let him fixed it back on this matter.
looks like he is already on fire list to HELL, due to unreasonably
destroying nature's beauty.
The Right Historic Exact Answer is Below.
NAY PYI is LIGHTED UP BRIGHTER and BRIGHTER.
SO AS TO RECOVER BACK ALL INFRASTRUCTURE WORKS (Electricity Supply, Drinking Water Supply, Sanitary System & Drainage System…etc) for the STABILITY OPERATION OF SOCIATY)
-SECOND, the NEW GOVERNMENT HAS to REBUILT THE COUNTRY for at least 10 to 15 years to RECOVER BACK the STABILITY OPERATION OF SOCIATY.
WITHIN A FEW YEAR ,HOW/WHO CAN BE COVER BACK THE 50 YEARS HUGE DEBT given to the country BY MILITARY GANGSTERS ?
(Please translate to Burmese Language to CITIZENS)
God giveasecond chance to TAY ZA already. HHmmmmmmm!!!!!!!!
“ဋ္ဌေးနိုင်”ဘယ် လိုအသတ်ခံခဲ့ ရသလဲ
ပြည်သူ၊ရဲဘော်၊မိ တ်ဆွေ များခင်ဗျား မိုးသီးဇွန်ဆီ မှအီးမေးတစောင်၊ လျှို့ဝှ က် စွာတွဲပြီးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အီးမေးထဲ မှာ“ ကျနော့ရဲ့အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ တိုက်ခိုက် မှုတွေ ကိုအခု လိုအရေးကြီးကာလမှာဖြေရှင်းစရာမလိုဘူး။ ဋ္ဌေးနိုင် ကိုသူ မသတ်ဘူးလို့ရေးထားပါတယ်။” ဒီ ကိ စ္စနှင့်ပတ်သက် လို့ဋ္ဌေးနိုင် ကိုမိုးသီးသတ်သလားမသတ်ဘူးလားဆိုတာ ကိုအများက ဆုံးဖြတ် ပါ။ ကျနော်သိသလောက်ရှင်းလင်းတင် ပြပါ့ မယ်။ ဋ္ဌေးနိုင်ဟာ ၁၉၈၈ ရန် ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက် ပါ။ ၁၉၈၈ မှာကျနော်ရန် ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုတည်ထောင် တဲ့ အခါ ဋ္ဌေးနိုင် ဟာ ကျနော့ရဲ့လက်အောက် ဖြစ် တဲ့ ရန် ကုန် တက္ကသိုလ်လှိုင်နယ်မြေ ဒေသကောလိ ပ်(၂) ရဲ့ သမဂ္ဂ တာဝန်ခံ တယောက် ဖြစ် ပါတယ်။ ကျနော့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလည်းဖြစ် ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိ မ်းပြီး၁၉၈၈ နယ် စပ် ကိုရောက်တော့သေဘောဘိုး စခန်းကိုရောက် ပါတယ်။ အဲ့ ဒီအချိန် ဟာ ABSDF ပထမသက် တန်းကျနော်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ( အေဘီဗဟို) မှာတာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကာလဖြစ် ပါတယ်။ ဒီ လိုနဲ့ နှ စ် လ သုံးလ အကြာမှာဋ္ဌေးနိုင် ဟာ ကျနော်နဲ့ အတူနေဖို့အေဘီဗဟိုကိုရောက် လာပြီး၊ ကျနော့နားမှာနေခဲ့ပါတယ်။ ABSDF နှ စ် ခြမ်းကွဲတော့ ကျနော်၊ ကိုကိုဦး၊ မိုးသီးဦးဆောင် တဲ့ ဘက် ကိုရပ်ခဲ့ပြီးမိုးသီးဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ် ပါတယ်။ ကိုကိုဦးက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ ကျနော်က EC ပါ။ မိုးသီးက ဋ္ဌေးနိုင် ကိုဗဟိုစစ်ရေးတာဝန်ခံပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ လိုနဲ့ ကိုကိုဦးနဲ့  ကျနော်တောင် ပိုင်းမှာတာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အချိန်ဋ္ဌေးနိုင် ကိုမိုးသီးက ဖမ်းလိုက် ပါတယ်။ ဒီအချိန် မှာနိုင်အောင်ဘက် မှာကိုနေဝင်းအောင်နှင့် ကိုစိုးလင်း( မြောက် ပိုင်းABSDF) ကိုသူ လျှိုမှုနှင့်ဖမ်းဆီးပြီးမြေကျင်းမှာထည့်ထားခဲ့တယ်။ ( တလအကြာမှာဋ္ဌေးနိုင်အဖမ်းခံရတယ် ဖြစ် ပါတယ်)။ ကျနော်နှင့် ကိုကိုဦးက မိုးသီးဆီ ကိုစက်ရိုက် ပြီး၊ ဘာကြောင့် ဋ္ဌေးနိုင်ကိုဖမ်းရတာလဲလို့ လှ မ်းမေးပါတယ်။ မိုးသီးက နိုင်အောင် တို့ဘက် မှကိုနေဝင်းအောင်နှင့် ကိုစိုးလင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့ အခါ သူ တို့ က မိုးသီးဘက် ကဋ္ဌေးနိုင် ဟာ လည်းသူ တို့နဲ့ အတူ တူ ပါပဲ လို့ ထွ က်ဆိုလို့ဖမ်းဆီးလိုက်ရတယ်လို့ဖြေရှင်းပါတယ်။ ကျနော် က ပြင်းပြင်းထန် ထန် ကန့်  ကွ က်ငြင်းချက် ထု တ်ခဲ့ပါတယ်။ ဋ္ဌေးနိုင် ဟာ သူ လျှိုလုံးဝမဟု တ်ဘူး။ ငါနဲ့ အတူ တူ လု ပ်ခဲ့တာ။ လွှ တ်ပေးပါ။ ငါအာမခံ တယ်။ ဋ္ဌေးနိုင်နဲ့  ပတ်သက် လို့ငါတာဝန် ယူ တယ် လို့ စက်သွ ယ်ရေးစက် မှ တဆင့်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိုးသီးဟာ ကျနော့် တောင်းဆိုချက် ကိုဂရု မစိုက် ပဲဖမ်းမြဲ ဖမ်းထားပါတယ်။ ကျနော်ကိုကိုဦးကိုမေးတော့ လည်းဋ္ဌေးနိုင် ဟာ သူ လျှိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက် ပြီးနိုင်အောင့် ဘက် ကပေးတဲ့ သတင်းနဲ့  ဖမ်းတယ်ဆိုတာ အခြေအမြစ် မရှိဘူးလို့သူ့စဉ်းစားချက် ကိုပြောပြီး၊ ကိုကိုဦးဟာ သူ့ ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန် ကိုအသုံးပြုပြီးမိုးသီးထံ ကိုကြေးနန်းရိုက် ပါတယ်။ “ မိုးသီးငါအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတယောက်အနေနဲ့ သဘောထားပေးတယ်။ ချက် ခြင်းလွှ တ်ပေးပါ” လို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိုးသီးဂရု မစိုက် ပါဘူး။ ဋ္ဌေးနိုင် ကိုဖမ်းမြဲ ဖမ်းထားပါတယ်။ အဲ့ ဒီတော့ကျနော်အတော်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးသီးမင်းဋ္ဌေးနိုင် ကိုချက် ခြင်းလွှ တ် ပါ။ မင်းမလွှ တ်ရင်ငါမာနယ် ပလော ကိုရောက်၊ ငါ့ တပ်နှင့်တိုက် ပြီးဋ္ဌေးနိုင်ကိုရအောင် ထု တ် ယူ မယ်လို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ လိုနဲ့ ကျနော် မာနယ် ပလော ကိုဆင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန် မှာကျနော့် ဆီ ကိုဖုံးတခု ဝင် လာပါတယ်။ အဲ့ ဒါကတော့ချင်းမိုင် မြို့ က ဗိုလ် မှူးကြီးထုံလို့ခေါ်တဲ့ ထိုင်းထောက် လှ မ်းရေးအကြီးအကဲ ပါ။ သူ က “သန်းဝင်းမင်းမဆင်းနဲ့ မင်းဆင်းရင်မယ်ဇရင်းဘတ် စ် ကားဂိ တ် မှာပလိ ပ်တွေ က မင်းကိုစောင့်ပြီးအပြီးသတ် လိုက် လိ မ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲ့ တော့ကျနော် က မေးတယ်။ ပလိ ပ်တွေ က ကျနော့် ကိုဘယ် လိုလု ပ်သိ လဲဆိုတော့ သူ က မင်းကိုနယ် စပ် ကိုမရောက်အောင်ထိုင်းနယ်မြေထဲ မှာအပြတ်ရှင်းဖို့ထိုင်းပု လိ ပ်ကိုဘတ်တသောင်းပေးထားပြီးဖြစ် တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်အတော်အံ့သြပြီးအတော် လည်းဒေါသဖြစ်ရပါတယ်။